Kpọtụrụ IC Card Mgbawa Fast Copy Replicator nke SLE4442, SLE4428, SLE5542, SLE5528, AT88SC102
1. Ngwa ngwa dee IC kaadị n'ime otu kaadị dị ka nne kaadị;
2. Ngwa ngwa gbanwee paswọọdụ nke IC kaadị;
3. Nyochaa ọdịnaya nke IC kaadị;
4. N'ihi na n'ihu 32 nchedo nkeji (00H ~ 1FH) nke IC kaadị, ma ọ bụrụ na ndị kwekọrọ ekwekọ unit ka na writable ala, ọ ga-rewritten na-agbanwe agbanwe na ọdịnaya na ọnọdụ nke nne kaadị.
5. Nchedo bit na-eme nke n'ihu 32 nkeji nke IC kaadị nwere ike na-egosipụta.
6. Ọ bụ omume na-amụba IC nọmba kaadị mgbe edegharị ọdịnaya.
The normal reader can't let the user know the fuse happening of the front 32 nkeji, and can't blow set the front 32 nkeji, This SJM2436 Copy Replicator solves this problem perfectly.
Na Mbụ: Kpọtụrụ IC Card Mgbawa Chọpụta Device
Osote: ID + MF1 mejupụtara Card Reader na-ede kwekọrọ ekwekọ Data Na MF1 Dị ka ID Ne Code
Kpọtụrụ IC Card Mgbawa Chọpụta Device
Kpọtụrụ IC Card Mgbawa Chọpụta Replicator Device
Kpọtụrụ IC Card Password Decrypting Test Device